Trailer-ka 'Blood Red Sky' oo Muujinaya Waxa Dhaca Markay Argagixiso Afduubato Diyaarad Vampire Onboard ah
Bogga ugu weyn Warar Naxdin Leh Trailer-ka 'Blood Red Sky' oo Muujinaya Waxa Dhaca Markay Argagixiso Afduubato Diyaarad Vampire Onboard ah
by Trey Hilburn III June 8, 2021
Muuqaalka soo socda ee Netflix ee loogu talagalay Dhiig Cas Cas waa mid aan jeclaan lahaa inaanan arkin. Si kastaba ha noqotee, haddaanan arag, weligay damac kama lahaan lahayn inaan daawado filimka. Marka, waxaan u maleynayaa inay tahay shardi, laakiin shar shar ah.
Gawaarida loogu talagalay Dhiigga Cas Cas, waxaa naloo baray hooyo xanuunsan iyo wiilkeeda oo habeenki diyaarad la raacaya. Diyaaradda waxaa aakhirkii afduubay koox argagixiso ah oo hubeysan. Laakiin, wiil, oh wiil ma waxay doorteen diyaarad qaldan oo ay ku qasaan.
Dulucda sheekada Casaanka Dhiigga Sky ayaa sidan u socota:
Qof dumar ah oo leh cudur dahsoon ayaa lagu qasbay inay ficil sameyso markii koox argagixiso ah ay isku dayaan inay afduubtaan diyaarad transatlantic habeenkii oo dhan. Si ay u ilaaliso wiilkeeda waa inay muujisaa sir mugdi ah, oo ay soo bandhigtaa bahalka gudaha ee ay u dagaallantay inay qariso.
Rasaasta waxaad ku arkeysaa in hooyada "jiran" hooyada dusheeda ay dhab ahaantii tahay qof aad u ooman-vampire oo isku dayaya inuu ku safro dabaqadda habeenkii. Waxay u hartay iyada oo aan lahayn wax ay doorto oo aan ka ahayn inay ka siideyso dareenkeeda dhiigyacab ah madaxa dhammaan kuwa nasiib-darrada ku filan inay hor istaagto.
Dhiig Cas Cas runtii waxay u egtahay mid qabow. Xoogaa waan helayaa Midka Xaqa Ha U Galo ka soo baxa. Waadna arki kartaa markaan idhi waxaan jeclaan lahaa inay jirto wado lagu suuq geeyo filimkaan iyadoo aan la muujin inay runti tahay vampire. Miyaad sawir ka daawan kartaa tan oo aanad ogayn? Lahaanshaha layaabkaas waxay noqon laheyd mid waxtar badan leh. Laakiin, halkan ayaan joognaa.
Filimku wali wuxuu umuuqdaa mid weyn waana mid aan si hufan u sugayo inaan hubiyo.
Dhiig Cas Cas waxaa jilaya Peri Baumeister, Kais Setti, Alexander Scheer, Dominic Purcell, Graham McTavish waxaana Director ka ah Peter Thorwarth.
Miyaad ku faraxsan tahay inaad iska hubiso Dhiig Cas Cas? Noo soo sheeg qaybta faallooyinka.
Sharka Dhimashada ee sharku wuxuu bilaabaa wax soo saar wuxuuna wadaagaa sawir si loogu dabaaldego Halkan ka eeg.
Dhiig Cas CasNetflixvampires
Neil Gaiman wuxuu bixiyaa Neefta ugu sarreysa ee la qabsiga soo socda ee Netflix ee 'Sandman'
Trailer-ka 'The Darkness' wuxuu u sheegayaa NC-17, Qiso-naxdin folk oo ku saabsan saaxiradda iyo is-beddelka